December 2016 – Page2– CRM
နေ့စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် မွတ်ဆလင် ၄ ဦးအား ထောင်တစ်ကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချခြင်းအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခြင်း မြန်မာ မွတ်ဆလင်များ ဖြစ်သည့် ကိုဇော်မင်းထွေး၊ ကိုမြင့်သိန်း၊ A ရာမန်၊ ကိုခင်မောင်ရွှေ တို့ အား KIA နှင့် ဆက်သွယ်သည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မန္တလေး ခရိုင် တရားရုံးမှ အတင်းအဓမ္မနှိပ်စက် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းသည့် ခံဝန်ချက်ကိုသာ လုပ်ထုံးနှင့်ဆန့်ကျင်၍အတည်ပြုပြီး ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်သက်တစ်ကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းတွင်- ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရသူများသည် တရားခံများ၏ အခွင့်အရေးကို လုံးဝ မခံစားရဘဲ တရားဥပဒေ အရ ခုခံချေပပိုင်ခွင့်လည်း မရှိပါလျက် စစ်ကြောရေး စခန်းတွင် အတင်း အဓမ္မ နှိပ်စက် လက်မှတ်ထိုး ခိုင်းသည့် […]
Posted on December 22, 2016 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
Foreign Minister Anifah Aman says Asean needs to coordinate humanitarian aid and investigate alleged atrocities committed against the Rohingyas. YANGON: Malaysia said on Monday the plight of Rohingya Muslims in Myanmar wasaregional concern and called for the Association of Southeast Asian Nations (Asean) to coordinate humanitarian aid and investigate alleged atrocities committed against […]
Posted on December 20, 2016 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
စစ်ပွဲ ထောက်ခံသူများကို ရှုတ်ချကြောင်း KYO ကြေညာချက်ထုတ်
ပြည်တွင်းစစ် အဓွန့်ရှည်စေမည့် တပ်မတော်၏ ထုိုးစစ်ဆင်မှုကို ထောက်ခံသည့် လုပ်ရပ်များကို ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခများကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် အဖြေရှာကြရန် တုိုက်တွန်းကြောင်း Kachin Youth Organization(KYO) ရှမ်းပြည်က ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ မုံးကိုးဒေသတွင် တပ်မတော်၏ လေကြောင်း တုိုက်ခုိုက်မှုကြောင့် မုံးကိုး အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း ခရစ်ယန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အပါအ၀င် နေအိမ် ၄၀ ကျော်ပျက်ဆီးခဲ့ပြီး သေဆုံးသူနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ အရပ်သားများလည်း ရှိကြောင်း အဆုိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ တပ်မတော် အငြိမ်းစားများ၊မွတ်စလင်မ် ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားသူများပါဝင် သည့် လူတစ်ထောင် ၀န်းကျင်ခန့်သည် တုိုင်းရင်းသားဒေသ အချို့တွင် တပ်မတော်၏ ထုိုးစစ်ကို တရားသောစစ်ဖြစ်သည့် အတွက် ထောက်ခံကြောင်း […]
Posted on December 19, 2016 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
Expressing concern over the situation in Myanmar’s northern Rakhine, the top United Nations human rights official warned that the Government’s “short-sighted, counterproductive, even callous” approach to the handling of the crisis could have grave long-term repercussions for the country and the region. Inanews release today, UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad […]
Posted on December 18, 2016 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
ရိုဟင်ဂျာတွေ ဒုက္ခခံစားနေရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရကို ကုလရှုတ်ချ
ကုလ လူ့အခွင့်အရေးရုံးဟာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေ သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ တစ်ခြားနှိပ်ကွပ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးနေ့စဉ် သတင်း ရရှိနေတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက် စစ်ဆင်ရေးကြောင့် အနည်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ ၈၆ ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရပြီး ၂သောင်း ၇ ထောင်ဟာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရဟာ ပြည်နယ်ထဲမှာ တန်ပြန်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးကိုဆောင်ရွက်နေတာလို့ပြောကြားပြီး ရက်စက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်အားလုံးကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ အများစုဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ “လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ချိုးဖောက်မှုတွေကို လုပ်ကြံပြောဆိုတာလို့ ယူဆနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရတဲ့ နေရာတွေကိုသွားရောက်ခွင့်လည်းမရရှိပဲ အပြစ်မဲ့အရပ်သားတွေဟာ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေအောက်မှာပဲ အစိုးရရဲ့ဥပေက္ခာပြုမှုနဲ့ စော်ကားနှိပ်စက်ခြင်းတွေကိုခံစားနေရပါတယ်။” လို့ Mr Hussein ကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “အာဏာပိုင်တွေမှာဘာမှဖုံးကွယ်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင် ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုရသလဲ” ကုလဒုက္ခသည်ရေးရာ အေဂျင်စီ (UNHCR) ကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Adrian Edwards က […]
၂၀၁၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်က မြန်မာမွတ်စလင်တွေရဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ လေးရက်အတွင်း ဈာပနာ သုံးခုကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အားလုံးဟာ အလွယ်တကူ ဆေးဝါး ကုသပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပြီး မသေသင့်ပဲ သေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် Moriam Katu လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ပန်းနာရောဂါကိုခံစားနေခဲ့ရတာ ၅ရက်လောက်ရှိပါပြီ သူဟာဆရာဝန်ကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပေမယ့် ဆရာဝန်ကပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး နောက်တော့ချောင်းဆိုးတာသွေးတွေပါလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သူမကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ခန့်မှန်းချေနိုင်ငံမဲ့ရိုဟင်ဂျာ ၁ သန်းခန့် ဟာမြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ်ကိုငြင်းပယ်ခံထားရပြီး အစိုးရစစ်တပ်တွေ ချထားတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ သာနေထိုင်နေရပါတယ်။ သူတို့တွေဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေ ၀င်ထွက်ခွင့်မရရှိပါဘူး။ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိသလို အစားအစာလည်းလုံလောက်မှုမရှိပါဘူး။ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အများစုဟာ စခန်းတွေထဲဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေကိုလည်းပိတ်ပင်ထားသလို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လူအားလုံးကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သေဆုံးအောင်လုပ်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာအများစုဟာ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ထွက်ပြေးခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ခန့်မှန်းခြေ ရိုဟင်ဂျာ ၃ […]
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ HRW အဆိုအရ ပြည်နယ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အိမ်ပေါင်း၁၅၀၀နဲ့ တစ်ခြားအဆောက်အဦးတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဂြိုလ်တုပုံရိပ်တွေ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေပြီးတဲ့နောက် အင်္ဂါနေ့မှာမှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးနဲ့ရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ကယူဆထားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးသံသယရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို နောက်ဆုံးမှာထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်”လို့ HRW ရဲ့လက်ထောက်အာရှဒါရိုက်တာ Phil Robertson ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ငြင်းဆန်နေမဲ့အစား မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေ အကူအညီပေးအပ်တာတွေကို ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာနဲ့ ဒီလိုမျိုးလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိတာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ယူအန်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ရေးကိုခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ သူကထပ်ဖြည့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အရေးအခင်းဖြစ်ပွားပြီးကတည်းက ခန့်မှန်းခြေ အရပ်သား၂သောင်း၁ထောင်ခန့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာ စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ခြင်းကိုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကို ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆို သူ့သားကိုမီးပုံထဲပစ်ထည့်ပြီးအရှင်လတ်လတ်အသတ်ခံခဲ့ရတာကို ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ယူအန်လူ့အခွင့်ရေးရာကိုယ်စားလှယ် ယန်းဟီလီက ဒီသက်သေတွေဟာ မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်တွေအနေနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇ၀တ်မှုနဲ့အရမ်းကို နီးကပ်နေပြီလို့ သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအနောက်နယ်စပ်အရေးဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအတွက် ကြီးမားတဲ့ဖိအားဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာက သူမလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ […]
Posted on December 13, 2016 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
‘What’s happening with the Rohingya is genocide’
Posted on November 12, 2017 Author swelsone